Nbugha ahia nke Mobile | Martech Zone
Ekwentị mkpanaaka ga-adịrịrịrị anyịịgịị, ma ugbu a, ha bụ ebe nkịtị. Smartphones na-aga n’ihu ma na-enwe mmekọrịta karịa mgbe ọ bụla, ma a ka nwere ihe ọhụụ ọhụrụ na-akpali akpali maka ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ.
A bịa n’ichepụta aha na ịkpọsa ngwa ahịa, ọ dị mkpa ịmata etu esi agaru ndị na-ege ntị n’ọrụ yana ndị ọrụ kọmputa maara nke ọma. Surge Digital abịawo na a ọhụụ ọhụrụ na-ekpughe otu esi arụ ọrụ mkparịta ụka mkpanaka n'ezie.
You ma na ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ekwentị ha anwụchi ozi ịntanetị karịa ndị na-eji PC desktọọpụ? Na na e nwere ndị ọzọ kwa afọ ama ịzụrụ karịa mbadamba, Laptọọpụ na desktọọpụ jikọtara? Lee anya n'okpuru ka ichoputa ihe…
Dijital Digital bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị nke na-ahụ maka mgbasa ozi ọdịnaya na njikwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ntanetị weebụ na mmepe.
Tags: igbemobile nchọgharịngwa ahiaekwenti e-commerceecommerce ekwentịemail mkpanakaigbe mbugharịahịa efumobile ahịa azummkpanaka mkpanakamobile na desktọọpụmobile nchọgharị na weebụSocial Media Marketing
Workamajig: Nchịkwa Ego na Nhazi maka Creativelọ Ọrụ Na-emepụta Ihe